1အလွှာ FR4 2OZ အဘယ်သူမျှမက X-Out လူပျိုတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ဘက်နှစ်ဦးစလုံး Silkscreen PCB ထုတ်လုပ်မှု PCB ရှေ့ပြေးပုံစံဘက် - တရုတ် FR4 2OZ အဘယ်သူမျှမက X-Out 1layer လူပျိုတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ဘက်နှစ်ဦးစလုံး Silkscreen PCB ထုတ်လုပ်မှု PCB ရှေ့ပြေးပုံစံပေးသွင်းဘက်,စက်ရုံ -WMD
1အလွှာ FR4 2OZ အဘယ်သူမျှမက X-Out လူပျိုတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ဘက်နှစ်ဦးစလုံး Silkscreen PCB ထုတ်လုပ်မှု PCB ရှေ့ပြေးပုံစံဘက်
260*188မီလီမီတာ / 8up
1L ကို FR4 1.6MM 2OZ အစိမ်းရောင်အဖြူရောင် Silkscreen Mask. ကျနော်တို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံး PCB စျေးနှုန်းများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပေးနိုငျ. သငျသညျရိုးရှင်းသောစံ PCB များအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းပေးနိုငျတဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, WMD တစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, အကောင်းဆုံးကိုအဘိုးနှင့်အမြန်-အလှည့်တညျဆောကျ. သင့်ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်သင်သာအနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့လိုအပ်ပါတယ်ကြသည်နှင့်သင်မကြာမီသူတို့ကိုမလိုအပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ QuickTurn PCBs စံပြဖြစ်ပါတယ်, အခမဲ့လျှပ်စစ်စမ်းသပ် & ဘတ်ဂျက်အဘိုးနှင့်မည်သည့် tool ကစွဲချက်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပျဉ်ပြားဆက်သွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, အာကာသ, လုံခွုံရေး, အိုင်တီ, ကွန်ပျူတာ, ဆေးဘက် ပစ္စည်းကရိယာ, စစ်ရေး, ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု. semiconductor.
အားလုံးအလွှာ PCB Quickturn PCB FR4 ပစ္စည်း Fast Delivery 1oz peelable မျက်နှာဖုံး ENIG 2U နှင့်အတူတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ 6-အလွှာ Multilayer PCB "
2 ကြေးနီ IPC-A-600 အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနျ Standard ul အတည်ပြုချက်ခဲ့သည် Rating 94V ပြီးဆုံးအလွှာထူကြေးနီ PCB 3oz-0
ပုံနှိပ်ဆားကစ်, ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး, ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB), ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့(PWB), တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့,6အလွှာ, 15 ပျဉ်ပြားမျိုး, အဆိုပါခရမ်းရောင်ဂဟေဆက်. အတူတူ panel က.
တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, မိုးသည်းထန်စွာပန်းကန်, ထူသောပန်းကန်, တောင့်တင်းသော 14 အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့. မြို့ပတ်ရထား PCB. မြင့်မားသော TG သည့် TEMP.